साञ्जेन र रसुवागढीको आईपीओमा पहिलो दिन नै सर्वसाधारणको उत्साहजनक सहभागिता | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर साञ्जेन र रसुवागढीको आईपीओमा पहिलो दिन नै सर्वसाधारणको उत्साहजनक सहभागिता
on: April 19, 2019 मुख्य खबर, लगानी
वैशाख ६, काठमाडौं (अस) । शुक्रवारदेखि सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागित देखिएको छ । विक्री खुला भएको पहिलो दिनमै साञ्जेनको आईपीओ २६ प्रतिशत बिकेको छ ।
त्यस्तै, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओमा पहिलो दिनमै करीब १९ प्रतिशत शेयर खरीदको आवेदन परेको छ । विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका चिफ अपरेटिङ अफिसर सन्दिप कार्कीका अनुसार रसुवागढीको आईपीओमा २६ हजार ३३४ जना आवेदकबाट रू. १७ करोड ३८ लाख ८ हजार बराबरको १७ लाख ३८ हजार ८० कित्ता शेयर खरीदको लागि आवेदन प्राप्त भएको छ ।
प्रतिकित्ता न्यूनतम मूल्य रू. १०० रहेको रसुवागढीको आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार कित्तासम्म र साञ्जेनको न्यूनतम १० देखि अधिकतम २ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । दुवै कम्पनीको शेयर छिटोमा वैशाख १० र ढिलोमा जेठ ५ गतेसम्म विक्रीमा रहने आव्हान पत्रमा उल्लेख छ । यी दवैै कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट चैत १० गते स्वीकृति पाएका थिए ।
रसुवा जिल्लामा साञ्जेनले १४.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेन र ४२.५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन गरी दुई आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै, रसुवागढी आयोजनाको क्षमता १११ मेगावाट छ । यी आयोजना चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गत निर्माण भईरहेका आयोजना हुन् ।
साञ्जेनको प्रतिशेयर नेटवर्थ गत आर्थिक वर्षसम्म रू. ९६ दशमव ३२ रहेको छ भने रसुवागढीको रू. ९७ दशमलव २९ रहेको छ । हाल रू. ५ अर्ब १३ करोड १५ लाख ७५ हजार चुक्तापूँजी रहेको रसुवागढीको यो आईपीओ पश्चात रू. ६ अर्ब १५ करोड ७८ लाख ९० हजार पुग्नेछ । त्यस्तै हाल रू. २ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख चुक्तापूँजी रहेको साञ्जेनको आईपीओ पश्चात चुक्तापूँजी रू. ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख पुग्नेछ ।